Eoropa tsara indrindra Restaurant Guide Michelin 2019 | Save A Train
Home > Travel Europe > Eoropa tsara indrindra Restaurant Guide Michelin 2019
Ny tsara indrindra fisakafoanana Michelin Eoropeana lehibe mpitari-dalana manome voalohany ka mikasa ny lamasinina nankany manodidina Eoropa. Ny mpitari-dalana izao Michelin tolotra Eoropa mpandeha fantina trano fisakafoanana sy hotely in 38 Eoropa tanàna. Tanàna vaovao telo no nanampy ity 2019 fanontana: Zagreb sy Dubrovnik, Kroasia, ary Reykjavik, Islandy. Anonymous nampiofana mpanara-maso mba hitsidika sy mifidy trano fisakafoanana raha mampihatra ny malaza Sakafo Michelin kintana-Rating rafitra ary mampiasa dingana toy izany koa ho an'ny trano fandraisam-bahiny. Ny vokany: ny soso-kevitra isan-karazany ho an'ny orinasa sy ny teti-bola rehetra tiany.
Mpandeha dia afaka mahatsapa matoky miantehitra amin'ny Michelin Mitarika mba hahatonga ny fiaran-dalamby nankany fa matsiro kokoa! Efa nidina izahay narrowed ny Eoropa fisakafoanana tsara indrindra Guide Michelin, ary mazava ho azy, miantoka fa mora foana ny fijanonana rehetra idirana lamasinina!
Eoropa fisakafoanana tsara indrindra Guide Michelin: Italia
Italia no nalaza noho ny anjara biriky lehibe ho an'ny tontolo zavakanto, maritrano, lamaody, opéra, boky sy gazety, famolavolana, sy ny horonan-tsary - ny lisitra mitohy, ary tsy nilaza na dia ny fanomezana ny tsara indrindra sehatra Eoropeana trano fisakafoanana.
Ny vaovao lehibe ao amin'ny 2019 dia hoe Italia manana vaovao kintana telo-trano fisakafoanana, Michelin ny voninahitra ambony indrindra!
Uliassi, miorina ao amin'ny Italia Senigallia ny amoron'ny Ranomasina Adriatika, farany manana ny kintana telo nandrasana efa ela taorian'ny nandany taona maro tamin'ny ambaratonga kintana roa.
Araka ny bilaogin'ny trano fisakafoanana Fine Dining Lovers. Mihazakazaka ny rahavavy sy rahalahy sy Mauro ekipa Catia Uliassi, ny trano fisakafoanana mametraka mavesatra mifantoka amin'ny hazan-dranomasina, ary manome sady Menio azo andramana sy la Carte fisakafoana. Uliassi ankehitriny sivy hafa iray amin'ireo telo-kintana Restaurants in Italia. Midika izany fa tamin'ny taona lasa rehetra ny telo-kintana toerana hatrany ny toe-, anisan'izany ny trano fisakafoanana malaza Modena Osteria Francescana.
Rimini ho Senigallia Lamasinina
Roma ho Senigallia Lamasinina
Fiaran-dalamby ho Ancona Senigallia
Florence ho Senigallia Lamasinina
Misy ankehitriny 367 nasianao kintana Eoropa fisakafoanana tsara indrindra Michelin, niakatra avy tany 356 taona lasa.
Tsy nisy vaovao kintana roa-trano fisakafoanana ao anaty lisitra amin'ity taona ity. Ny mpitari-dalana no ahitana ny whopping 29 kintana vaovao-trano fisakafoanana iray avy amin'ny mihoatra ny roa ampolony Zavatra kaominina. Izany dia mitondra ny tanteraka ho 318. ankapobeny, ny mpitari-dalana endri-javatra 367 nasiana kintana trano fisakafoanana, niakatra avy tany 356 taona lasa.
Eoropa fisakafoanana tsara indrindra Guide Michelin: Grande-Bretagne
Antsoina hoe "ny Oscars ny sakafo orinasa" Ny loka ny lanonana ao amin'ny Waterloo BFI IMAX sarimihetsika dia nisongadina ho chefs manerana ny firenena.
Ity taona ity, ny tsara indrindra ao Eoropa trano fisakafoanana Grande-Bretagne mbola tsy iharan'ny amin'ny trano fisakafoanana dimy mianatra izy ireo nahavita hitana ny kintana. Cue nisento Fikambanana! The Araki, Restaurant Gordon Ramsay sy Alain Ducasse amin'ny Dorchester no London orinasa mba hihazona eny an-tanana aminy, toa an'i Heston Blumenthal Gana ny Fat sy ny akaiky rano Alain Roux Inn, na in Bray.
Maro ireo fiarandalamby nankany London amin'ny fotoana samihafa manerana an'i Eoropa. Head ny SaveATrain au livre tapakila amin'ny minitra ny mijery ny tsara indrindra avy grub!
The Michelin Guide 2019 lisitra feno
Alain Ducasse amin'ny The Dorchester
Eoropa fisakafoanana tsara indrindra Guide Michelin: Pays-Bas
The Netherlands (na Holland) dia firenena kely ary feno sary masina malaza eran-tany. Beautiful jiro saha, Windmills, fromazy tsena, hazo kiraro, Lakandranon'i Amsterdam, Masterpieces of Old Masters, Delft Blue tanimanga, zava-baovao rano-fitantanana, ary an-tapitrisany bisikileta. Ary misaotra soa ho an'ny bisikileta. ny 2019 Guide Michelin for Holandy manana tanteraka ny 571 toeram-pisakafoanana sy ny 263 trano fandraisam-bahiny. Ianao handeha mila ny workout.
Fantina amin'ity taona ity dia manasongadina roa vaovao misy kintana roa-toeram-pisakafoanana sy 12 orinasa nahazo kintana iray voalohany.
Misy ankehitriny 89 misy kintana iray-tsara indrindra any tanteraka. Amin'ny Derozario in Helmond, Jermain Rozario De mametraka ny kofehy ireny amin'ny Indoneziana nahandro. amin'ny mpanjaka trano fisakafoanana Tilburg, Paul Kappe mitaona sy fisakafoana hariva ny maoderina nahandro miaraka amin'ny fatratra tsirony, tahaka Jeroen Brouwer amin'ny ny Loohoeve in Schoonloo sy Thomas Van Santvoort amin'ny ankizivavy in Kerkdriel. Ny hamafin'ny ny tsirony koa inona no mampiavaka ny inventiveness Naparitaka nataon'i Jim sy Mike Cornelissen amin'ny Rijnzicht in Doornenburg, ary izany no sakafo ny vilia ny nateriny OONIVOO uden. Fa tia ny tsara sakafo ao lafo vidy manodidina azy, Bougainville in Amsterdam, ary Voltaire in Leersum dia tanteraka musts.
Aiza mba hisambotra ny fiaran-dalamby
Amsterdam Central Station no tena fiantsonan'ny fiaran-dalamby ary no tena fon'ny tanàna: foibe tsy ny anarana, fa koa ny lehibe indrindra fitateram-bahoaka famindrana toerana, ka dia ho toerana tsara misambotra ny fiaran-dalamby koa.
Eoropa fisakafoanana tsara indrindra Guide Michelin: Espaina
Madrid dia ny renivohitry ny Espaina ary ny lehibe indrindra kaominina in na ny Community de Madrid ary Espaina iray manontolo.
Madrid dia andro firavoravoana ara-kolontsaina. Izany dia ny fitepon'ny fo ny taona 1920. Nitsidika ny literatiora greats toy ny Ernest Hemingway sy ny Fitzgeralds, F Scott sy Zelda, ankoatry ny zavatra hafa.
Manana a tsena fivarotana sakafo ho tia, fa ny Michelin Star ireo trano fisakafoanana dia tsy mba malahelo na!
Alohan'ny loha tsy mahazo manao amin'ny voalohany, dia manoro hevitra anao manomboka ny hariva eny amin'ny Molotov avy amin'ny broody Museo Chicote bara. Ny toerana dia iray amin'ireo Hemingway ny haunts ary eto no hahita ny toerana tena zava-pisotro, ary am-polony vitsivitsy ny hafa ianao mety tsy nanandrana. Loha dia tsy misy aloha anoloan'ny vahoaka naka.
Madrid manana manodidina 3,100 trano fisakafoanana, fa vitsivitsy no nahazo kintana ny malaza Guide Michelin. Misy 16 Restaurants in Madrid omena amin'ny Michelin kintana: DiverXO (kintana telo); Santceloni, La Terraza do Casino, Sergi Arola, Ramon Freixa Madrid sy El Club Allard (kintana roa); ary Kabuki, Kabuki Wellington, DSTAgE, Albora, Goat sy Punto MX (kintana iray). Ankoatry ny, ny manodidina ny trano fisakafoanana iray tao an-tanàna (akorandriaka) manana kintana roa ary misy kintana telo-trano fisakafoanana iray: Casa Jose, Chiron, sy Montia. Rehetra ireo manompo izao tontolo izao-kilasy ny sakafo sy ny asa fanompoana tsara dia tsara manolotra.
Ny trano fisakafoanana ambony Michelin kintana fifantenana tao Madrid tanàna DiverXO (3 mahafinaritra kintana!)
Ny zavaboary ny Chef David Muñoz maneran-tany no nampiaiky volana gourmets. Coolness, herim-po, ary ny famoronana no lakilen'ny fahombiazan'ny DiverXO. Ity trano fisakafoanana ny sakafo miova ny vanim-potoana, fa ny manana fahafaha roa. Ny XOW Menu sy ny Menu Glotón XOW. Both the menus offer the same food and only vary in quantity and price.
Tsy mahazo: Ny fomba tsara indrindra hahazoana izany pick ny tsara indrindra dia amin'ny alalan'ny fisakafoanana eoropeanina Metro ary avy eo dia mahazo eny amin'ny Tetuan Station (-dalana, 1).
Te-hahafantatra ny fomba tsara indrindra mba hahazoana na dia iray ihany amin'ireo toerana any Eoropa lamasinina? Save A Train mazava ho azy! Lohany amin'ny eo amin 'ny tranonkala mba hahita ny tsara indrindra vidin-javatra, in segondra!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary omeo anay fotsiny ny voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-european-restaurant-michelin%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)